Miyuu Garsooraha Arsenal vs Tottenham Ee Mike Dean Taageere U Yahay Tottenham? Maxay Jamaahiirta Arsenal Ku Neceb Yihiin? Iyo Rekoodhka Kulamadii Gunners Ee Uu Soo Qabtay? - Gool24.Net
Miyuu Garsooraha Arsenal vs Tottenham Ee Mike Dean Taageere U Yahay Tottenham? Maxay Jamaahiirta Arsenal Ku Neceb Yihiin? Iyo Rekoodhka Kulamadii Gunners Ee Uu Soo Qabtay?
Jamaahiirta kooxda Arsenal ayaa si wayn u neceb garsooraha loo doortay kulanka London Derby ee Mike Dean kaas oo dhex dhexaadin doona kulanka axada dhex mari doona kooxaha Arsenal iyo Tottenham. Jamaahiirta Gunners ayaa cod dheer kaga qayliyay in Mike Dean loo doortay kulanka Gunners iyo Spurs.
Mike Dean waa garsoore lagu xusuusto dhacdooyin aad u badan oo ay waliba qaar ka mid ahi layaab leeyihiin iyada oo tilmaamaha jidheed ee uu caanka ku yahay sabab u noqdeen in shaki la galiyo taageeranimadiisa. Waxaa jira laba muuqaal oo aad caan u ah kuwaas oo lagu xusuusto Mike Dean.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa xaqiiqooyin muhiim ah oo ay tahay in aad ka ogaato garsoore Mike Dean iyo sababta ay jamaahiirta Gunners ku naceen. Laakiin sidoo kale waxaanu eegi doonaa sababta uu garsoore Mike Dean kooxda Gunners ugu fiican yahay in kulankan loo doortay.
Aan ku bilawnee waxaa jira laba muuqaal oo caan ah kuwaas oo uu Mike Dean si layaableh uga falceliyay goolal ay dhaliyeen kooxo uu dhex dhexaadinayay waxaana ugu caansan dhacdadii Emirates Stadium ee sanadkii 2012 kii markaas oo Mike Dean lagu eedeeyay in uu si waali ah ugu dabaal degay goolkii Louis Saha uu Arsenal ka dhaliyay.
Laakiin markale waxaa aduunka kubbada cagta layaab ku noqotay in Mike Dean uu u dabaal degay gool kale oo ay Tottenham dhalisay laakiin marka waxa uu ahaa garoonkii Tottenham ee White Hart Lene kadib markii uu Mousa Dembele uu gool ka dhaliyay Aston Villa sanadkii 2015 kii.
In laba jeer Mike Dean lagu eedeeyay in uu u dabaal degay goolal ay kooxda Tottenham dhalisay waxay noqotay dacaayad wayn oo lagu nabay Mike Dean waana sababta ay jamaahiirta Arsenal uga cadhoodaan in Dean uu garsoore ka noqdo kulanka North London Derby.
Laakiin Miyay Xaqiiq Tahay in Garsoore Mike Dean uu Taageere u Yahay Kooxda Tottenham?
Maamulka iyo xidhiidha garsoorka Premier league waxaa waajib ku ah in ay hubiyaan garsoore kastaaba kooxda uu taageero waxaana laga diwaan galiyaa kooxda uu taageero isla maalinta uu shaqada garsoore bilaabayo waxaana garsoore Mike Dean u diwaan gashan in uu taageero kooxda Tranmere.
Sidaa daraadeed, garsoore Mike Dean taageere uma aha kooxda Tottenham balse waxaa looga bartay in falcelinta iyo luuqadiisa jidh ahaaneed ay tahay mid marar badan dadka ka yaabisa isaga oo aan xataa taageeranimo ayna ka ahayn.
Sidoo kale xaqiiqda ayaa muujinaysa in Mike Dean uu yahay garsooraha ugu fiican Arsenal marka ay noqoto kulamada Premier league ee dhamaan garsoorka waqti xaadirkan ka hawl gala Premier League.
Xogtu been ma sheegto, waxayna Arsenal soo guulaystay boqolkiiba 50% kulamadii premier league ee uu soo dhex dhexaadiyay mana jiro garsoore kale oo Premier league ka hawl gala oo ay Gunners guulo ka badan Mike Dean ay ka heshay kulamadii ay qabteen.
Waxaaba ka sii yaab badan in Arsenal ay kulamada Premier League soo guulaysatay boqolkiiba 11.1% kaliya marka uu kulamadeedii premier League soo qabtay garsoore aan Mike Dean ahayn marka laga hadlo dhamaan garsoorka hadda ee Premier League.
Haddii aan idinka idinku soo celiyo, miyaad filaysaa in garsoore Mike Dean uu Arsenal taageere u yahay maadaama oo kalidii ay soo guulaystay boqolkiiba 50% halka kulamadii garsoorka kale oo dhan ay boqolkiiba 11.1% soo guulaysatay?.
Waxay arintani muujinaysaa in waxa la sheego ee taageerayaasha xagjirka ahi sheegaan iyo xaqiiqdu ay tahay wax aad u kala fog. Waxaanu sidoo kale halkan idiinku haynaa garsoorkii abid ay Gunners guulaha ugu badan kaga soo hoos gaadhay Premier League kuwaas aan hadda inta ugu badani ayna shaqada ku jirin.
Halkan kaga bogo Rekoodhka Guud Ee Garsoorka Premier League Ee Kooxda Arsenal.
Sidoo kale halkan kaga bogo Rekoodhka Mike Dean Ee Kulamadii uu Arsenal Soo Qabtay Heerkii Guulaheeda iyo waliba Garsoorka kale oo dhinac ah.
Haddaba halkan ka daawo muuqaaladii layaabka lahaa ee Garsoore Mike Dean loogu eedeeyay in uu Tottenham taageero iyo qaabkii lama filaanka ahaa ee uu goolashan uga falceliyay.
Haddaba akhriste, haddii aad Arsenal taageerto, miyayna xogta aanu idinla wadaagnay ku filnayn in garsoore Mike Dean uu yahay garsooraha ugu fiican Gunners ee ay tahay in ay jamaahiirta Gunners ku farxaan?
Dean waa flrefree aan ugu necbahay epl kaaga siidarane wuxuu daganyahay London gaar ahaan xafada Toteham